Prothum Alo ------
Altaf Parvez,Ashfaq Rony,Shafiqul Alam
Published: 02 Jan 2022, 13:11
General Twan Mrat NaingReuters file photo
The Arakan or the Rakhine state of Myanmar isaclose neighbour of Bangladesh and has been so in the past. With the influx of the Rohingyas, this state has placed Bangladesh inaworrisome predicament. The Arakan Army isasignificant political and military factor there. General Twan Mrat Naing is the commander in chief of the Arakan Army. On 19 December, he spoke over Zoom from the Chin state to three journalists and researchers of Bangladesh on the situation in Arakan and Myanmar.
Labels: 2022, Arakan Leader, en, News, Recognise, Rohingya, Twan Mrat Naing
Labels: 2022, Burma, en, Joseph R. Biden, News, Prss Release, The White Huse
ရွှေပြည်သာတွင် ဖမ်းမိသည့် အထောက်အထားမဲ့ ၉၉ ဦးမှ ၅ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့
ရွှေပြည်သာမြို့တွင် ဖမ်းမိခဲ့သူများ / ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့က ဖမ်းမိခဲ့သည့် အထောက်အထားမဲ့ဝင်လာသူ ၉၉ ဦးထဲမှ အမျိုးသမီး ၅ ဦးတွင် ကိုဗစ် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရကြောင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာမြတ်မြတ်နှင်းက ပြောသည်။
ဒေါက်တာမြတ်မြတ်နှင်းက “ဒီနေ့ RDT Test Kit နဲ့ ပဏာမစစ်လိုက်တဲ့ဆီမှာ ၅ ဦးမှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့၊ ကျန်တဲ့ သူတွေကတော့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကောင်းပါတယ်၊ နောက် ၃ ရက်လောက်ကျရင် နောက်တ ကြိမ် ထပ်ပြီး စစ်ဖို့ကိုတော့ တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကို တင်ပြပြီးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
Labels: 2022, mm, ရွှေပြည်သာ